Zvinoenderana neazvino patent yakanyoreswa neApple, iyo Apple Penzura inogona kushandiswa neiyo trackpad yeMac | IPhone nhau
Kubva Apple paakatanga Apple Penzura kuti ishande pamwe chete neese 12,9-inch uye 9,7-inch iPad Pro, zvakawanda zvakafungidzirwa pamukana wekuti Cupertino-based kambani inogona kupa rutsigiro kuitira kuti chishandiso ichi chigone kushandiswa chaicho pane trackpad iyo kambani inotengesa sechishongedzo chakazvimiririra cheMacs. Asi ichangobvumirwa patent yakanyoreswa nekambani inoita kunge inosimbisa kuti zvinogoneka mune ramangwana.
United States Patent uye Yekutengesa Hofisi yakaburitsa nguva pfupi yadarika runyorwa rwemashure makumi matatu nemasere patent iyo yakapa kambani yeApple Kunyanya, pakati pezvose zvatinogona kuwana, imwe yakabatana neApple Penzura yakamira. Mukutsanangurwa kwepatent tinogona kuona kuti sei iyo Apple Penzura inogona kushandiswa pamwe chete neshanduro dzeramangwana dze trackpadNaizvozvo, vashandisi vezvino vechizvarwa chechipiri, chakatangwa neApple gore rapfuura, havazokwanise kuzviita kudzamara Apple yagadzirisa izvo. Kana tikatarisa kuti zvinotora nguva yakareba sei kuti ivandudze, unogona kumirira makore mashanu kana matanhatu murunyararo.
Iyo Apple Penzura inogona kushandiswa kudzora kunyorera kuburikidza nemasaini ari mumhepo, bvumira kudzora masiraidhi eiyo Keynote application asiwo Izvo zvichatibvumidzawo isu kuishandisa sekunge yaive danda remufaro, kuita sekunge raive banga uye zvimwe zvakawanda. Zvingave zvinonakidza dai Apple ikakwanisa kuwedzera zvese izvi zvitsva zvichangobva kubvumidzwa mabasa kune yazvino trackpad, asi senge chero patent yakanyoreswa hazvireve kuti ivo vachasvika kumusika nekukurumidza, kana zvikazoitika, nekuti mazhinji acho anonyoreswa chete kudzivirira kubva kumamwe makambani anogona kunge aine zano rakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Zvinoenderana neazvino patent yakanyoreswa neApple, iyo Apple Penzura inogona kushandiswa neiyo trackpad yeMac
Rondedzero ye tweak inoenderana neIOS 9.2-9.3.3 (II)